XUSEEN CAYDIID JAGUU UBUKAA.
Qore cali maxamed diini (calidhuux)
Marka hore ilaahay ayaa mahad leh. Marka labaad sababta igu dhalisay inaan qoraalkaan kaqoro Xusein maxamed caydiid waxay tahay waxaan arkay maqaallo ay isku radinayaa labada nin e kala ah Ibraahim daauud iyo maxamed cismaan,.
Waxaan ognahay in xuseen caydiid xubin muhiim ah ka’ahaa dawlada fedaralka ah, asaga oo ka’haa k/xigeenka cali maxamed geedi, ahna wasiirka arimaha gudaha.
Waxaan ognahay inuu xuseen caydiid siwayn uga soo horjeeday maxkamadihii islaamka, waliba waxa uu kutilmaamijiray inay xiriir laleeyihii argagixisada caalamiga ah. Waxaa dad badan oo soomaaliyeed xasuustaan hadalkii nacasnimada iyo jaahilnimada xambaarsanaa ee uu kasheegay xarunta maxadtooyada Somalia, asaga oo lahadlayay odayaal soomaali ah. Hadalkaas oo ahaa, waxaan baabi’inaynaa xuduudka Somalia iyo Ethiopia hal baasaboorna waan samaynaynaa maxaayeelay waa walaaleheen.
Sida dad badan oo soomaali ah ay sheegayaan hadalkaas wuxuu sabab unoqday in xilkii laga qaado. Maadaama uu fashilay arin sir ahayd. Markaas ayuu xuseen cumaarad kunoqday dawladii uu u jidbaysnaa, mana ahan wax kale ee xilkii ayaa laga qaaday. Marka xuseen soomaalina dan ayleedahay mahayo mid Ethiopa leedahayna mahayo asmarana sidoo kale ee waxa uu laqafiifay waa xil jacayl.